IWCA နွေရာသီအင်စတီကျု - နိုင်ငံတကာစာရေးစင်တာများအသင်း
အတု၊ ဇွန် ၁၃-၁၇၊ ၂၀၂၂
ဧပြီလ 15 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။ https://iwcamembers.org/
အကန့်အသတ်ရှိသော ထောက်ပံ့ကြေးများရရှိနိုင်သည် - ဧပြီလ 15 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်လွှာတင်ပါမည်။
မှတဆင့် စာရင်းသွင်းပါ။ https://iwcamembers.org/. 2022 Summer Institute ကိုရွေးချယ်ပါ။ IWCA တွင် အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယခုနှစ် IWCA Summer Institute ကို virtual၊ global၊ flexible နှင့် accessible ဟူ၍ စကားလုံးလေးလုံးဖြင့် အကျဉ်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ 13 ခုနှစ် ဇွန်လ 17-2022 ရက်၊ XNUMX ခုနှစ် ဒုတိယမြောက် virtual နွေရာသီအင်စတီကျုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါ။ SI သည် အစဉ်အလာအားဖြင့် လူများနေ့စဉ်တာဝန်များမှ ကင်းဝေးပြီး အစုအဖွဲ့တစ်ခုအနေဖြင့် စုရုံးရမည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး လောကုတ္တရာကိစ္စများမှ ရုန်းထွက်နိုင်မှုအတိုင်းအတာသည် သင့်အပေါ်တွင် မူတည်နေသော်လည်း ယခုနှစ်အုပ်စုသည် အခွင့်အရေးကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စာရေးစင်တာပညာရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ပရင့်ဗားရှင်းအတွက်၊ ကိုနှိပ်ပါ။ 2022 SI ဖော်ပြချက်. လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များကဲ့သို့ပင်၊ ပါဝင်သူများသည် ရက်ရောသောရောနှောပါဝင်ရန် အတွေ့အကြုံကို အားကိုးနိုင်သည်-
တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့ငယ်များကို လမ်းညွှန်ပေးခြင်း
အခြားသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လှုပ်ရှားမှုများ
သင့်အတွက်စီစဉ်သူများနှင့်အစည်းအဝေးခေါင်းဆောင်များစီစဉ်ထားသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတစ်ရက်ပြီးတစ်နာရီ၊ တစ်နာရီခရီးစဉ်ပါအစီအစဉ်ဇယားများကိုကြည့်ရှုပါ။ သင်၏အဆင်ပြေမှုအတွက် ၄ င်းတို့ကိုကွဲပြားသောအချိန်ဇုန် ၄ ခုအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသည်။ သင်၏နေရာကိုဤနေရာတွင်မပေးပါကသင့်တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည့်စီစဉ်သူများကိုဆက်သွယ်ပါ။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအားလုံးကို အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို အချိန်မရွေးတစ်ပြိုင်နက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ SI ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးရန် ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသောကြောင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ $400 သာ (ပုံမှန်အားဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ $900) ဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးသွင်းသူ 40 ဦးသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရက် 40 စာရင်းသွင်းပြီးနောက် စောင့်ဆိုင်းစာရင်းကို စတင်ပါမည်။
ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ- ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီရက် ၃၀ အထိ (အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေရလိမ့်မည်) (မေ ၁၄) နှင့်ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ ၁၅ ရက်အထိပြန်အမ်းငွေပြန်ရလိမ့်မည် (မေ ၃၀) ။ ထိုအချက်ပြီးနောက်ပြန်အမ်းငွေမရနိုင်ပါ။
Joseph Cheatle ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ jcheatle@iastate.edu နှင့်/သို့မဟုတ် Genie Giaimo at ggiaimo@middlebury.edu မေးခွန်းများနှင့်အတူ။
သင်သည် စာရင်းသွင်းလိုပါက အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သေးပါက IWCA အဖွဲ့ဝင်အကောင့်တစ်ခုအတွက် အကောင့်ဖွင့်ပါ။ https://iwcamembers.org/ထို့နောက် 2022 Summer Institute ကို ရွေးပါ။
ဂျိုးဇက် Cheatle (သူ/သူ/သူ)သည် အိုင်အိုဝါရှိ Ames ရှိ Iowa State University မှ စာရေးခြင်းနှင့် မီဒီယာစင်တာ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူသည် ယခင်က Michigan State University ရှိ The Writing Center ၏ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး Case Western Reserve University တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကြံပေးအဖြစ်နှင့် Miami University မှ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ လက်ရှိ သုတေသန ပရောဂျက်များသည် စာရေးဌာနများတွင် စာတမ်းပြုစုခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်၊ ပိုမိုထိရောက်စွာနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပရိသတ်များကို ပြောဆိုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိစာရွက်စာတမ်းအလေ့အကျင့်များ၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် သူစိတ်ဝင်စားပါသည်။ သူသည် International Writing Centers Association Outstanding Research Award ကို ရရှိခဲ့သော အရေးအသားစင်တာ စာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်ရှုသည့် သုတေသနအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အလေ့အကျင့်, WLN, ပြီးနောက် ဂျာနယ်၏အရေးအသားပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ, Kairos, အဆိုပါ အရေးအသားစင်တာဂျာနယ်, ပြီးနောက် ကောလိပ်ကျောင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဂျာနယ်. စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ သုတေသန၊ တင်ပြမှုများနှင့် ထုတ်ဝေမှုများပုံစံဖြင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် အတိုင်ပင်ခံများအတွက် ကျွမ်းကျင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို မည်ကဲ့သို့ပံ့ပိုးပေးရမည်ကို စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ကျောင်းတွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အရင်းအမြစ်အကြံပြုချက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် စာရေးစင်တာများသည် ကျောင်းသားများအတွက် လုံး၀ပံ့ပိုးမှုပေးပုံကိုလည်း သူစိတ်ဝင်စားပါသည်။ ယခင်က IWCA ဘုတ်အဖွဲ့တွင် အကြီးစား ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ East Central Writing Centers Association Board ၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း၊ IWCA Collaborative @ 4Cs ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။ Kelsey Hixson-Bowles နှင့်အတူ Summer Institute 2021 ၏ ပူးတွဲဥက္ကဌလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် မီရှီဂန်၊ East Lansing တွင်ကျင်းပသော 2015 ခုနှစ်တွင် Summer Institute ကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။
Genie Nicole Giaimo (SI Co-Chair, သူတို့/သူမ) သည် Vermont ရှိ Middlebury College ရှိ စာရေးစင်တာ၏ လက်ထောက်ပါမောက္ခနှင့် ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ လက်ရှိ သုတေသနသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မိမိကိုယ်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျူရှင်ဆရာ၏ သဘောထားများ၊ စာရေးဌာန မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းနှင့် ကျူရှင်ဆရာ၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် စာရေးဌာနအပေါ် ကျောင်းသားများ၏ သဘောထားအမြင်များကဲ့သို့သော စာရေးဌာနအတွင်း အပြုအမူများနှင့် အလေ့အကျင့်များဆိုင်ရာ မေးခွန်းများစွာကို ဖြေဆိုရန် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိသုတေသနသည် အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ . လက်ရှိ ဗားမောင့်တွင် အခြေစိုက်ထားသော Genie သည် ပွင့်လင်းသော ရေကူးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့် ပညာရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် တရားမျှတသော အလုပ်သမား ကျင့်ထုံးများ အတွက် လှုံ့ဆော်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ သူတို့ဖြစ်ခဲ့တယ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ in အလေ့အကျင့်, သုတေသနစာတမ်းရေးသားခြင်း။, The Journal of Writing Analytics, နှစ်နှစ်ကောလိပ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားခြင်း။, Online Literacy Education တွင် သုတေသနလုပ်ပါ။, Kairos, စည်းကမ်းများကို ဖြတ်ကျော်ပါ။, Multimodal Rhetoric ဂျာနယ်နှင့် တည်းဖြတ်ထားသော စုစည်းမှုများ (Utah State University Press, Parlor Press)။ သူတို့၏ ပထမဆုံးစာအုပ်မှာ တည်းဖြတ်ထားသော စုစည်းမှုဖြစ်သည်။ စာရေးဌာနအလုပ်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် စောင့်ရှောက်မှုပွင့်လင်းမြင်သာသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရောဂျက်တစ်ခု။ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိစာအုပ်၊ Unwell- Neoliberal Writing Center and Beyond တွင် ကျန်းမာရေးကို ရှာဖွေနေပါသည်။ Utah ပြည်နယ် UP နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည်။
Jasmine Kar Tang (သူမ/သူမ/သူမ) သည် ရောင်စုံအမျိုးသမီးဝါဒနှင့် Writing Center Studies ၏ လမ်းဆုံကို စူးစမ်းလေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားသည်၊ စာရေးညှိနှိုင်းမှု၊ ကြီးကြပ်မှုအလေ့အကျင့်၊ အုပ်စုလိုက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအလုပ်၏ အနည်းအကျဉ်းကို စူးစမ်းလေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ဟောင်ကောင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများ၏ သမီးဖြစ်သူ၊ သူမသည် အမေရိကန် စာရေးဌာနတွင် အာရှနိုင်ငံများတွင် လူမျိုးရေးအာဏာကို ပြဋ္ဌာန်းထားပုံ၏ လူမှုသမိုင်းဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များကို တွေးတောနေပါသည်။ Jasmine သည် Minnesota-Twin Cities ၏ University of Writing and the Minnesota Writing Project ၏တွဲဖက်ဒါရိုက်တာအဖြစ်နှင့် စာတတ်မြောက်ရေးနှင့် ဝေါဟာရလေ့လာရေးတွင် တွဲဖက်ဘွဲ့လွန်ဌာနအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ Jasmine သည် Twin Cities တွင် စမ်းသပ်ဖျော်ဖြေသည့် အနုပညာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် Aniccha Arts ၏ ပြဇာတ်အဖြစ် သူမ၏ လေ့ကျင့်ရေးကိုလည်း အသုံးချသည်။
အဲရစ် ကာမာရီလို (သူ/သူ/သူ) Harrisburg Area Community College မှ Learning Commons ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းဝင်းငါးခုရှိ ကျောင်းသား 17,000 ကျော်အတွက် စမ်းသပ်ခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ အသုံးပြုသူပံ့ပိုးမှုနှင့် ကျူရှင်ဝန်ဆောင်မှုများကို ကြီးကြပ်ပါသည်။ သူ၏ သုတေသနအစီအစဉ်သည် လောလောဆယ်တွင် ဤနေရာများအတွင်း စာရေးစင်တာများနှင့် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ၊ စာရေးစင်တာအလေ့အကျင့်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဝါဒနှင့် ဤအလေ့အကျင့်များသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အွန်လိုင်းပုံစံများတွင် မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ The Peer Review၊ Praxis: A Writing Center ဂျာနယ်နှင့် ဂျာနယ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု အစီအစဉ်များ. သူသည် နိုင်ငံတကာစာရေးဌာနအသင်း၊ အလယ်အလတ်အတ္တလန်တိတ်စာရေးစင်တာအသင်းနှင့် ကောလိပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ဖရင့်တို့အပါအဝင် ကွန်ဖရင့်များစွာတွင် သူ၏သုတေသနကို တင်ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် သူသည် စာရေးခြင်းဆိုင်ရာ သက်တူရွယ်တူကျူရှင်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး တည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။ Writing Center ဂျာနယ်။ သူသည် Texas Tech တက္ကသိုလ်မှပါရဂူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
Rachel Azima (သူမ/သူတို့) သည် စာရေးဌာနကို ညွှန်ကြားခြင်း၏ ဆယ်နှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် သူမသည် University of Nebraska-Lincoln တွင် စာရေးဌာနဒါရိုက်တာနှင့် တွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ Rachel သည် Midwest Writing Centers Association Executive Board ၏ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး IWCA အတွက် MWCA ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ အဓိက သုတေသနနှင့် သင်ကြားရေး စိတ်ဝင်စားမှုသည် လူမှုရေး၊ အထူးသဖြင့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာတရား၊ စာရေးဌာနများဖြစ်သည်။ Rachel ၏ လက်ရာသည် မကြာသေးမီကမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် နှစ်ခုလုံးတွင် ထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ WCJနှင့် အလေ့အကျင့်. Kelsey Hixson-Bowles နှင့် Neil Simpkins တို့နှင့် လက်ရှိ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသော သုတေသနပရောဂျက်ကို IWCA Research Grant မှ ပံ့ပိုးထားပြီး ရောင်စုံစာရေးစင်တာများတွင် ခေါင်းဆောင်များ၏ အတွေ့အကြုံများကို အာရုံစိုက်ထားသည်။ သူမသည် စာရေးစင်တာကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာ တည်းဖြတ်ထားသောစုစည်းမှုတစ်ခုအတွက် CFP တွင် Jasmine Kar Tang၊ Katie Levin နှင့် Meredith Steck တို့နှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Violeta Molina-Natera (သူမ/သူမ/သူမ) Ph.D ရရှိထားသူ ပညာရေး၊ ဘာသာဗေဒနှင့် စပိန်ဘာသာဖြင့် MA နှင့် စကားပြောကုထုံးပညာရှင်ဖြစ်သည်။ Molina-Natera သည် Javeriano စာရေးဌာန၏ တည်ထောင်သူနှင့် ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး Pontificia Universidad Javeriana Cali (ကိုလံဘီယာ) ရှိ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဘာသာစကားများ သုတေသနအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ သူမသည် လက်တင်အမေရိက စာရေးဌာနများနှင့် ပရိုဂရမ်များ RLCPE ၏ လက်တင်အမေရိက ကွန်ရက်၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ လက်တင်အမေရိက ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံတကာ စာရေးဌာနအသင်း IWCA ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ALES နှင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်၊ လက်တင်အမေရိက စာရေးလေ့လာရေးအသင်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းစု။ Molina-Natera သည် WAC Clearinghouse ၏ရေးသားခြင်းကိုလေ့လာခြင်းအတွက် International Exchanges ၏လက်တင်အမေရိကကဏ္ဍအတွက်စပိန်ဘာသာစကားတည်းဖြတ်သူဖြစ်ပြီး၊ စာရေးစင်တာများနှင့်စာရေးအစီအစဉ်များအကြောင်းဆောင်းပါးများနှင့်စာအုပ်အခန်းများရေးသားသူလည်းဖြစ်သည်။